Updated: 2016-02-11 16:28
ချိခုဂေါ မှာ ရှိ တဲ့ရေပူစမ်း ဖြစ် ပါ တယ်။မြင့် မား တဲ့ဒြပ် စဉ် တွေ ပါ ၀င် တဲ့ ရေ ရဲ့ အကျိုး တွေ ကို ဖေါ်ဆောင် ထား ပြီး တည် မြဲ တဲ့ ပုံ ရှိ တဲ့ ရေ ပူစမ်း ဒေသ ပဲ ဖြစ် ပါ တယ်။ သန့် စင် တဲ့...
Updated: 2015-12-18 17:32
မိဇုတခိဟာ ရေနွေး၊ ကြက်သားနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို အရသာဘာမှမထည့်ဘဲချက်ထားသော ဟော့ပေါ့ဖြစ်ပါတယ်။ ရေညှိအနည်းငယ်ကိုလည်း ထည့်လေ့ရှိပါတယ်။ သဘာဝကြက်သားနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်အရသာများကို ခံစာ...
Updated: 2015-12-17 09:53
ငါးဥများကို ငရုတ်ကောင်းအနီများဖြင့် အရသာသိပ်ထားသော အစားအစာတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဟကတရဲ့ အထူးထွက်ကုန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ထမင်းနဲ့စားလေ့ရှိပါတယ်။ အခြားချက်ပြုတ်ပုံ အမျိုးမျိုးရှိပြီး မင်းတိုင်းပစတာ၊ မင်းတိုင်းကြက်ဥထမင်...
Updated: 2015-09-17 17:19
တင်းဂျင်းမြေအောက်ရှော့ပင်းစင်တာဟာ ဖုခုအိုက၊တင်းဂျင်းရဲ့မြေအောက်တွင်ရှိပါတယ်။ အနီးအနားရှိ ရုံးဌာနများ၊ ဈေးဝယ်စင်တာများသို့ချိတ်ဆက်ထားသော ထွက်ပေါက်၂၀ရှိပါတယ်။ ရာသီဥတုအချိန်အခါမရွေးဝယ်ယူနိုင်ပြီး အ...
Updated: 2015-09-10 12:58
ခုကိုင်(ခုဘိုဒိုင်းရှိ)က ဂျပန်တွင်ပထမဆုံးဆောက်လုပ်ခဲ့သော ဘုရားကျောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ရှင်းဂွန်ဗုဒ္ဓဘာသာတရားတော်အရ သာသနာပြန့်ပွားစေရန် အရှေ့ဘက်သို့မျက်နှာမူကာ ဆောက်လုပ်ထားပါတယ်။ ဒုတိယထပ်တွင် ရုပ်...
Updated: 2015-09-07 09:51
ဟကတဆိပ်ကမ်းရဲ့သင်္ကေတတစ်ခုအဖြစ် ရှိနေတာကတော့ ဟကတဆိပ်ကမ်းတာဝါပဲဖြစ်ပြီး မြေပြင်အထက် ၇၀မီတာတွင်ရှိသောကြောင့် မြို့တစ်ခုလုံးကို၃၆၀ဒီဂရီကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ထို့ပြင်၊ တာဝါတိုင်အနီးတွင် ဟကတပင်လယ်အော်ေ...
Updated: 2015-06-22 10:29
ဟကတရဲ့သူတော်စင်များ သတင်းသုံးရာ ဗိမာန်အဖြစ် လူသိများသော ခုရှိဒဗိမာန်ဟာ နွေရာသီပွဲတော်များ၊ ဂိယွန်ရိုးရာ အခမ်းအနားများကိုလည်း ကျင်းပလေ့ရှိပါတယ်။ ၇လပိုင်း၁၅ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသော ပွဲတော်တွင်တော့ မနက်...
Updated: 2015-06-02 15:52
ကမ္ဘာပေါ်တွင် အာရှရဲ့မော်ဒန်၊ခေတ်ပြိုင်အနုပညာလက်ရာများကို တစ်စုတစ်စည်း စနစ်တကျစုဆောင်းပြသထားသော နေရာဖြစ်ပါတယ်။ ပြခန်းများအပြင်၊ အာရှအနုပညာရှင်များကို ဖိတ်ခေါ်ကာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ၊ ပြတ...